Filtrer les éléments par date : mardi, 07 juillet 2020
mardi, 07 juillet 2020 23:35
Brezila: Voan’ny Covid-19 ny filoha Jair Bolsonaro
Nandritra ny resaka nataony tamin’ny fahitalavitra, androany talata 7 jolay, no nilazan’ny filoha breziliana Jair Bolsonaro fa mitondra ny tsimokaretina Covid-19 izy taorian’ny fitiliana natao azy rehefa nisy fambaran’aretina niseho taminy ; nafana hoditra.
mardi, 07 juillet 2020 23:17
Tsenan’Andravoahangy: Noravana ny tsena rehefa tonga ny ora tokony hodian'ny olona any an-trano
Nifarimbona ny Polisin’ny Kaomisaria Boriborintany fahatelo sy ny avy amin’ny Hery vonjy taitra na FIP tamin’ny fandravana ireo tsena sy fampodiana ireo mpivarotra sy olona tetsy amin’ny tsenan'Andravoahangy Antananarivo Renivohitra rehefa tonga ny ora tokony hodiana any an-trano androany. Vetivety dia nadio ny toerana. Nanome tanana ireo mpivarotra ny Polisy.
mardi, 07 juillet 2020 23:10
Antananarivo Renivohitra: Mikatona avokoa ny tsena Kaominaly sy ny tsena isan-kerinandro
Namoaka fampahafantarana ny fiadidiana ny tanànan’Antananarivo Renivohitra ho fampiharana ny tatitry ny Filankevitry ny minisitra ny sabotsy 4 jolay 2020 teo.
Anisan’ny fepetra noraisina ny fikatonan’ireo tsena Kaominaly sy ny tsena isan-kerinandro afa-tsy ireo izay mivarotra entana ilaina amin’ny fiainana andavanandro.
mardi, 07 juillet 2020 13:45
Covid-19: Fepetra samia "mi-demerda"
600 millions de dollar na 2 250 miliara ariary (Atsasaky ny tetibolam-panjakana iray manontolo) no voaray ho fanampiana iadiana amin'ny Covid-19.
100 millions de dollar takalon'ny saika fitrandrahana vy tany Soalala, no nahavitana nampandeha ny Tetezamita 2009-2013 sy nanaovana ireo fotodrafitrasa, hopitaly sy kianja maro samihafa.
Misy ny fanampiana tsy averina, ary misy trosa izay ny taranaka Malagasy ny mibaby sy mandoa an'io 600 millions de dollar io ao anatin'ny 30 taona.
Hatreto ny fanapahan-kevitra rehetra noraisin'ny fanjakana dia fanapahan-kevitra samia "mi-demerda" fa ny fanjakana poketra vy. Nambaran'ny minisitry ny teti-bola teo imason'ny Loholona mihitsy moa ny hoe ny fanjakana tsy afaka manampy ny tsy miankina.